Dagaal Culus oo ka dhacay Degaan hoostaga Degmada Balcad – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 3 June 2016 3 June 2016
Balcad (Mareeg)—Wararka laga helayo Degmada Balcad ayaa sheegaya in Dagaal Culus oo u dhaxeeyay Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Kooxo hubeysan uu ka dhacay Degaanka Xabaadleey oo hoostaga Degmadaasi.
Dagaalkan ayaa yimid kadib markii Dabley hubeysan ay Weerar ku qaadeen Saldhig Ciidamada Dowladda ay ku leeyihiin Degaanka Xabaadleey oo hoostaga Degmada Balcad ee Gobolka Sh.Dhexe.
Ugu yaraan 3 Ruux oo ka kala tirsanaa dhinacyadii Dagaalamay ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen Dagaalkaasi, sida Dadka Degaanka ay u xaqiijiyeen Idaacadad Shabelle ee Magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, Koox hubeysan ayaa labo Ruux oo midi lagu sheegay Haween waxey ku Dileen Degaanka Xabaadleey ee Gobolka Sh.Dhexe, iyadoona Raggaasi ay baxsadeen sida ay tilmaameen Dadka Degaanka.
Maamulka Degaanka Xabaadleey ee Gobolka Sh.Hoose oo la hadlay Idaacadad Shabelle ayaa sheegay in Dagaalada iyo sidoo kale Dilalkaasi ay salka ku hayaan anooyin qabiil.
Xaalada goobihii lagu Dagaalamay ayaa deggan, inkastoo weli aysan jirin cid ku baxday xiisadaha beeleed ee la soo sheegayo in ay ka aloosan yihiin qeybo ka mid ah Gobolka Sh.Dhexe.
DEG DEG: Madaxweyne Erdogaan oo furay Safaarada Turkiga ee Muqdisho